Fenoarivo – Atsimondrano : Fiangonana iray voatery nakatona noho ny… pesta | NewsMada
Fenoarivo – Atsimondrano : Fiangonana iray voatery nakatona noho ny… pesta
Par Taratra sur 11/10/2017
Vehivavy iray no voamarina taorian’ny fitiliana fa tratran’ny aretina pesta, teny Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Namoy ny ainy ity ramatoa ity fotoana fohy taorian’ny nahatongavany teny amin’ny hopitaly. Nandray fepetra ny manampahefana teny an-toerana, nanakatona ny fiangonana iray, ny alahady lasa teo.
Tsy misy izay tsy mihorohoro ny rehetra ankehitriny noho ny fihanaky ny valan’aretina pesta. Haingana dia haingana ny fiparitahan’ny aretina. Saika isan’andro, araka ny tarehimarika, misy hatrany ireo mamoy ny ainy. Anisan’izany ity vehivavy iray, teny Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano ity. Ny asabotsy teo izy io, araka ny fantatra no namoy ny ainy, taorian’ny nitondrana azy teny amin’ny hopitaly. Nisy ny fitiliana natao azy, ka voamarina fa pesta tokoa no nahazo azy.
Manoloana izany, nandray ny andraikiny ireo manampahefana teny an-toerana, ny andron’io asabotsy io ihany. Anisan’ny fepetra noraisina, ohatra, ny fandrarahana fanafody teo amin’ny fokontany misy an’ity vehivavy ity. Norarahana fanafody tahaka izany koa ny tokantranon’ireo nifanerasera taminy akaiky. Fantatra mantsy fa hoe mpantsaka sy mpizara rano amin’ny tokantrano manodidina eo ny asan’ity vehivavy ity.
Ankoatra izay, satria manakaiky fiangonana iray eny an-toerana ny trano misy azy, ka dia noraisina koa ny fepetra tamin’ny fanakatonana ity trano fivavahana ity. Tsy afaka niditra am-piangonana, araka izany, ireo kristianina tao amin’ity fiangonana io ny alahady lasa teo. Asa, hatramin’ny rahoviana no haharetan’izany fanakatonana izany. Fantatra fa nanaiky sy nanaraka ny fepetra noraisina ny mponina teny an-toerana, na ireo kristianina tao amin’ity Fiangonana nakatona ity. Ho amin’ny tombontsoan’ny rehetra rahateo ny nandraisana ny fepetra.
Ity teny Fenoarivo ity izany no trano Fiangonana voalohany nandraisana fepetra tamin’ny fanakatonana azy, noho izao toe-draharaha hiarahan’ny rehetra mahalala izao. Teo aloha teo, nandeha ihany ny resabe tetsy sy teroa hoe anisan’ny iharan’ny fandrarana famoriana olona koa ve izany ny Fiangonana. Tsiahivina fa mbola mihatra hatramin’izao ny fampiatoana ny fianaran’ny ankizy, na amin’ny sekolim-panjakana izany na amin’ny tsy miankina. Eny, hatramin’ny eny amin’ny oniversite aza. Miato tahaka izany koa ireo hetsika fampisehoana, fety aman-danonana isan-karazany.